ICC ga-ama ndị agha Naịjirịa ikpe maka ogbugbu mmadụ - BBC News Ìgbò
ICC ga-ama ndị agha Naịjirịa ikpe maka ogbugbu mmadụ
12 Febụwarị 2018
Ndị gọọmentị Naịjirịa ji El zakzaky kemgbe 2015
Ụlọikpe mba ụwa na-ahụ maka mpụ bụ ICC si na ha emechala nyocha nke mbụ banyere ogbugbu mmadụ ndị agha Naịjirịa mere na Zaria nakwa Umuahia. Ogbugbu mmadu metụtara ndi Shia, bu ndị ndi agha Naịjirịa wakporo na Decemba 2015, na nke mere mgbe ha wakporo ndị IPOB.
ICC na-akọwa na ha mechara nyocha na Decemba 2017 ma nye ya onyeisi ọkaiwu Naịjirịa bụ Abubakar Malami, ebe ha jụkwara ndị isi ọchịchị Naịjirịa ihe ha nwereike ikwu banyere ogbugbu ndị mmadụ a.
ICC sị na mwakpo awakporo ndị Shia, nọ na ngalaba Islamic Movement of Nigeria (IMN) nke Ibrahim El Zakzaky bu onyeisi ha, bụ nke ndị agha Naijirịa mere megidere mkpebi ndị otu dị icheiche na ahu maka mpụ na ụwa nille kwenyere na.
Ọzọ dị ka ya bụ ogbugbu ndị na eme ekweghịekweghi maka Biafra bu IPOB ndị agha megidere nke ukwu mgbe ha nwuchikọrọ onyeisi ha bu Nnamdi Kanu na ọnwa Ọktoba nke 2015. Ka ndị gọọmentị Naịjirịa mechara tụhapụ Mazi Kanụ, ha mechara wakpo ụlọ ya, ma gbuo ndị IPOB ụfọdụ, ma mezie Kanụ onye a na-achọ achọ, ICC kwuru.
Nnamdi Kanụ bu zizi onye a na-achọ achọ
Ndị ICC kwuru na ọ bụ ihe ịgba ama ha nwetere site n'ebe dị icheiche ka ha jiri hazie akwụkwọ ha dere maka nyocha nke mbụ a. Ha sịkwara na ha tinyere akwụkwọ pụtara na nyocha nke gọọmentị Kaduna steetị mere banyere ogbugbu egburu ndi Shia na Zaria.
Gọọmentị Naịjirịa ekwugbeghị okwu banyere ihe a ICC kwuru mana anyi ga ewetara unu akụkọ gbasara ya oge ọ bụla ọ pụtara.
Vidio, Udo, azụmaahịa na ịkụ ngwọrị alọghachịla n'Imo Steetị - Komishọna Uweojii
16 Juun 2021
Vidio, Ihe e ji sị na ọgwụ bekee anaghị na-agwọ ọrịa Achaere na ndị ọzọ
Vidio, Gịni dị n'ime ajụ mbaise a?, Duration 3,14
Ihe dị egwu ga-eme ma ọkọ kọọ Ifeanyi Ejiofor – Sunday Igboho
Etu esi wakpoo ụlọ ma gbuo onye ndọrọndọrọ ọchịchị n'Imo Steeti
Ihe ndị mmadụ kwuru maka etu Udeh Chiamaka Victoria si fee ọkọlọtọ Naijiria na Russia
Ipob na ndị otu Oduduwa ejikọla aka hibee otu nchekwa ọhụrụ